Akụkọ - Ọ bụrụgodi na enwere ihe egwu, ịchacha ọcha na - ewu ewu karịa mgbe ọ bụla
Ọgwụ Pesticides Intermediates
Ndị Ọgwụ Ọgwụ
Chemicals kwa ụbọchị
Chemicals ndị ọzọ
Ọbụna ma ọ bụrụ na enwere ihe egwu, ịcha ọcha anụ ahụ na-ewu ewu karịa mgbe ọ bụla
Itcha ọcha ma ọ bụ ịcha ọcha bụ isiokwu na-agbagha agbagha. Ọ na-eweta ụzọ mara mma iji meziwanye ọdịdị gị.
E nwere ọtụtụ ụzọ esi eme ka ọkụ dị ọcha. Ndị a na-agụnye ude pụrụ iche na ọgwụgwọ laser. N'ihi ọnụ ala ya na nchekwa dị elu, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ude akpụkpọ.
Ọ bụrụ na ị na-atụle ngwaahịa na-acha ọcha, enwere ụfọdụ ihe ị ga-ebu ụzọ mara. Isiokwu a kọwara akụkụ kachasị mkpa, ọkachasị ihe ndị mejupụtara ya.
Akpụkpọ anụ bụ isi na-ezo aka n'iji ọgwụgwọ pụrụ iche ma ọ bụ ihe iji meziwanye ma ọ bụ mee ka ụda akpụkpọ ahụ dị nro. Ndị mmadụ na-eji okwu dị iche iche akọwa ya, gụnyere ịcha ọcha, ịmụnye ma ọ bụ ịchacha akpụkpọahụ.
Ngosipụta nke anụ ahụ mmadụ n'ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ọ daa mbà. Agka nká, ihe mmetọ, ájá, unyi, ụzarị ultraviolet na mmiri ọgwụ (gụnyere ndị nọ na nlekọta nlekọta anụ ahụ) nwere ike imebi anụ ahụ.
Erighị nri na-edozi ahụ, nhọrọ ndụ na-adịghị mma na nchekasị nwekwara ike inwe mmetụta dị njọ na ọdịdị nke anụ ahụ.
Ihe ndị a dị iche iche nwere ike ibute nsogbu dị iche iche, gụnyere ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, afọ dị iche iche, ọnya otutu na ntụpọ.
Ndị mmadụ na-adabere na ngwaahịa na-acha ọcha na ọgwụgwọ iji dozie nsogbu ndị a. Ha na-eji ha iji meziwanye ma ọ bụ weghachi agba anụ.
Site na ngwaahịa ọkụ anụ ọkụ, ị nwere ike dakọtara akụkụ akpụkpọ hyperpigmented na agba nke anụ gbara ya gburugburu. Akụkụ ndị a gụnyere akara omumu, ntụpọ, chloasma na tonsils.
Igwe ọkụ bụ ihe zuru ụwa ọnụ, ọ bụ ezie na akọọrọ mmasị dị ukwuu na ọkụ anụ ọkụ na Africa, Middle East na India. Na 2013, a na-ebu amụma na site na 2018, ahịa zuru ụwa ọnụ na-acha ọcha ga-eru ihe ruru ijeri dollar 20 US.
Ngwaahịa na usoro ọgwụgwọ nwere ike iji usoro dị iche iche iji kwalite ihu na ihu mara mma. Mana ndị na-enwu gbaa na-arụ ọrụ nke ọma site na igbochi mmepụta nke melanin ma ọ bụ site na inye aka ibibi ya.
Melanin bụ isi ihe na-arụ ọrụ na agba akpụkpọ. Nke a bụ ụdị nke ọchịchịrị polima. Enwere ọtụtụ ndị nwere akpụkpọ ojii.
Ahụ mmadụ na-emepụta ụcha a site n'usoro imepụta melanin. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo ụdị isi abụọ nke ihe dị na anụ ahụ na ntutu, bụ: Eumelanin (nwa ma ọ bụ aja aja) na pheomelanin (edo edo ma ọ bụ ọbara ọbara). Specificdị akpụkpọ ahụ kpọmkwem ga-ekpebi ụda ya.
Ọtụtụ ndị na-enwu gbaa na-arụ ọrụ site na igbochi mmepụta nke pigments. Ha na-eme nke a site na ibelata ọrụ ụfọdụ enzymes na-enye aka na usoro ahụ. Enzyme a ma ama na njikọ bụ tyrosinase.
Ahụ gị na-adabere na L-tyrosine iji melanin. Na usoro mbu nke imepụta melanin, tyrosinase na-agbanwe amino acid a n'ime L-Dopa. Ndị na-enwu enwu na-anwa igbochi okwu, mmalite ma ọ bụ ọrụ nke enzymes, si otú a na-egbochi mmepụta pigmenti.
Fọdụ ihe ndị ọzọ dị na ngwaahịa ịcha ọcha nwere ike inyere decolorize aka. Ha na - enyere aka ibibi melanin dị na ahụ.
Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ngwaahịa na-acha ọcha anụ ahụ n'ihi na afọ adịghị eju ha na iji ihe ịchọ mma iji nweta ọbụna akpụkpọ anụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha nwere ike imeli ya, ha na-atụkarị ụjọ ịnweta ọgwụgwọ laser.
Agbanyeghị, ngwaahịa na ebumnuche iji nweta ọdịdị mara mma na-ata ahụhụ rap ngwa ngwa. Dị ka akụkọ si kwuo, ha na-akpata nsogbu ndị ọzọ dị iche iche nke nwere ike ime ka ha ghara ịba uru iji ma ọlị.
A na-ekwu na ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a nwere ihe ndị na-emerụ ahụ. Mgbe ụfọdụ, a chọpụtara na ha nwere kemịkal na-egbu egbu nke nwere ike ibute nsogbu anụ ahụ, gụnyere kansa.
Ndị mmadụ na-ejikarị okwu ahụ bụ "ịcha ọcha" eme ihe mgbe ha na-ekwu okwu gbasara nsogbu nchekwa a. Maka nke a, ụlọ ọrụ na-ezere iji ya kọwaa ngwaahịa ha.
Iji ihe ndị na-emerụ ahụ eme ihe kemgbe ọtụtụ afọ emeela ka ude ịcha ọcha na mba ụfọdụ machibido.
Anyị aghọtachaghị ihe mere ụfọdụ ndị na - emepụta ihe ji ahọrọ ihe a na - egbu egbu. N'ihi nnweta ihe nchekwa ma ọ bụ nke eke ọzọ. Ikekwe nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọchịchọ maka uru dị elu.
N'okpuru ebe anyị na-atụle ụfọdụ ihe egwu dị egwu, mgbe ị hụrụ ha, ị kwesịrị itinye gị ozugbo na ude ọcha. I gha achota ihe omuma banyere ihe di nma nke ezigbo ihe kwesiri inwe.
Nke a bụ ihe eji ewu ewu nke ndị nrụpụta na-etinyekarị na nri. Ugbu a, ọtụtụ mmadụ amatala banyere ọghọm ya, nke mere ka ụfọdụ ụlọ ọrụ jiri nkọwa nkọ maka nke a, dị ka mercury, mercuric ammonia ma ọ bụ mercury chloride.
Ejiwo Mercury mee ihe maka anụcha akpụkpọ anụ ruo ọtụtụ iri afọ. Mgbe etinyere ya na akpụkpọ ahụ, ọ nwere ikike iji belata njikọ nke melanin, ya mere a na-eto ya nke ukwuu. Iji belata ọnụahịa azụmahịa nke onye nrụpụta ahụ, ọnụahịa ahụ dị obere ma dịkwa mfe inweta.
Kemgbe ahụ, ọtụtụ mba / mpaghara (dị ka afọ ndị 1970 na Europe) amachibidoro iji ngwaahịa a eme ka anụ ọcha. A machibidoro ihe a ma kewaa ya dị ka nsị na United States.
Mercury nwere ike ịnọ na anụ ahụ ruo ogologo oge, ya mere ọ nwere ike ịkpata nsogbu ndị ọzọ. Ọ nwere ike ibute ụcha akpụkpọ na akpịrịkpa na-enweghị isi. E nwekwara akụkọ na ọ na-emetụta ụbụrụ ụbụrụ ma na-akpata mmebi akụrụ. Mgbe ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ ndị nne na-enye ara na-eji ya, ọ nwekwara ike ibute ọrịa ụbụrụ na ụmụ ọhụrụ
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka anụ ahụ na-acha ọkụ na-enyere aka ịchọ mma. A na-atụ aro ya na ndị nwere vitiligo na-ahọrọ iji creams ma ọ bụ ihe ngwọta dị n'ime nwere benzophenone. A na - eji ọrịa gbara ọchịchịrị na anụ ahụ mara ọrịa a. Ngwakọta ahụ na-enyere aka belata ụcha dị na akpụkpọ ahụ ma mee ka akpụkpọ ahụ daa.
Mana o nwere ike ibibi melanocytes ma mepụta melanosomes dị mkpa maka njikọ melanin. Yabụ, iji ya nwere ike ibute nchapu na-adịgide adịgide ma ọ bụ enweghị ike ịgbanwe agbanwe.
Ewezuga vitiligo, ndị dọkịta anaghị akwado iji monobenzophenone n'okpuru ọnọdụ ndị ọzọ. Mana ọ ga-eju gị anya ịhụ na ụlọ ọrụ ụfọdụ gụnyere ya na ihe ịchọ mma nkịtị. Nsogbu ndị nwere ike ibute site n'iji ụdị ihe ndị a eme ihe na-agụnye ink na-acha uhie uhie na-enwu enwu na anwụ.
Ihe na-eme ka akpụkpọ anụ ahụ na-echegbu onwe gị, nke mere na iji ya nwere ike inwe mmetụta ndị a na-atụghị anya ya na ndị ọzọ. Ekwuru na mgbe ejiri ya, ọ nwere ike ibute ụcha ndị ọzọ naanị site na ịkpa anụ.
O juru gị anya? O nwere ike ịbụ na ịmabughị tupu steroid nwere ike ịdị na ngwaahịa na-acha ọcha. Ma ha nwere ike.
Steroid nwere ike inye aka na-acha ọcha akpụkpọ ahụ n'ụzọ dị iche iche. Otu n'ime ha metụtara ka ha si akwụsịlata ọrụ melanocytes. Ma ha nwekwara ike belata ntụgharị anụ ahụ nke anụ ahụ.
Otú ọ dị, ọ bụ nsogbu bụ isi na ihe ndị a na-arụ ụka anaghị etinye na ude ọcha. Eczema na psoriasis bụ ọrịa abụọ ndị ọkachamara na-agwọ ọrịa na-ejikarị ha agwọ. Ezigbo nsogbu bụ iji oge dị ogologo.
A na-eji steroid, gụnyere corticosteroids, agwọ ọrịa ọrịa akpụkpọ. Ekwesịrị ịnye ọgwụ, nke pụtara na ị gaghị achọta ha na ihe ịchọ mma nkịtị. Ogologo oge iji ha nwere ike belata mmebi na-adịgide adịgide na anụ ahụ.
Ọtụtụ ọgwụ nlekọta anụ ahụ nwere mmanụ ịnweta dịka ihe eji eme ihe. Emeputa na-eji ya enyere moisturize anụahụ aka. Ọ dịkwa ọnụ ala-dị ọnụ ala karịa mmanụ dị mkpa dị mkpa.
Otú ọ dị, ndị mmadụ na-enwe nchegbu banyere ike nke ihe a nwere ike ịkpata nsogbu akpụkpọ. Mmanụ dị n'ime gị nwere ike igbochi pores akpụkpọ gị, na-eme ka o sie ike iwepu ihe ndị na-emerụ ahụ. Ya mere, ị nwere ike ịnwe nsogbu dịka otutu na pịm. Iji mee ka ihe ka njọ, a na-eche na ihe mejupụtara ya bụ carcinogenic.
Ikwesighi inweta uru nke ikpuchi akpụkpọ site na nke a. Parabens bụ otu ihe eji eme ihe. Ndị na-emepụta ihe na-ejikarị ha eme ihe iji gbatịkwuo ndụ nke ntecha.
Nsogbu nke mgwa a nwere ike ibute nwere nnyonye anya na sistemụ gị na usoro ọmụmụ. Achọpụtakwala na ọ na-eme ka ọrịa cancer baa ụba.
N'ebe a, ị nwere ihe ndị na-ewu ewu na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ. Hydroquinone bụ ọgwụ na-egbochi njikọta melanin site na igbochi tyrosinase. Nke a dị oke irè. Ya mere, a na-ahụkarị ya na ọtụtụ ude ndị na-acha ọcha.
Nke a adịghị egwu dịka ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. Nke a bụ n'ihi na ndị ọkachamara na-akwado ya oge ụfọdụ, ọkachasị ụdị nsonye 2% (ma ọ bụ obere). Ma olee otu ị ga - esi chọpụta ike nke otu ude ọcha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ekwughị ya?
Na mgbakwunye na ike, iji hydroquinone ogologo oge na-emekwa ka ohere nke mmetụta dịkwuo elu. Ọ nwere ike ibute ụcha akpụkpọ anụ, na ọ bụrụ na ọ ga-adịgide adịgide. Nke a nwekwara ike imetụta ụfọdụ enzymes ndị na-arụ ọrụ dị mkpa na ahụ mmadụ.
Mmanya na-egbu egbu, dioxane na phthalates bụ ihe ndị ọzọ nwere ike imerụ ahụ nke ị kwesịrị ị paya ntị na akpụkpọ anụ ọkụ gị iji gbochie ntụpọ gbara ọchịchịrị.
Mgbe a na-ekwu maka eke, nchekwa ndị na-egbu anụahụ, ndepụta ahụ agaghị ezu oke ma ọ bụrụ na ọ tinyeghị mkpụrụ nke mkpụrụ osisi citrus (dị ka oroma na lemọn). Ihe ndị a bara uru, karịchaa n'ihi nnukwu vitamin C ha. Ekwenyere na ogige ahụ nwere ihe na-acha ọcha anụ.
Otú ọ dị, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ndị mmadụ na-ekwu banyere vitamin C n'ụzọ sara mbara site na uru nke uru anụ ahụ. Lọ ọrụ ahụ nwere ihe ndị na-egbochi antioxidant ma nwee ike inye aka igbochi ihe ịrịba ama nke ịka nká, dị ka ezigbo ahịrị na ahịhịa.
A kwenyere na Citrus wepụ na-enye aka na mmepụta nke collagen, nke bụ ihe nzuzo dị n'azụ siri ike, nke na-eto eto. Ha nwere ike melite udidi nke anụ ahụ ma kwalite uto nke sel ọhụrụ.
A na-akpọkwa ihe a vitamin B3 ma a na-ahụkarị ya na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ dị elu. Otu n'ime ihe kpatara nke a bụ mmetụta ọkụ anụahụ ya. Ọ na - enyere aka belata mmepụta nke melanin.
Nicotinamide na-emepụta mmetụta antioxidant ma nwee ihe mgbochi mkpali. Ga-ahụ na ọ na-ejide mmiri ma nyere aka mee ka anụ ahụ dị nro ma dịkwa nro. Vitamin na-enyekwa aka ịhazi mmanụ nke akpụkpọ ahụ.
Mgbe ejiri ya na N-acetylglucosamine, a na-ekwenye ịdị irè nke vitamin a.
O nwere ike ịbụ na ị nụla na ụfọdụ ndị na-akwado iji mkpụrụ osisi (dị ka mulberry, bearberry ma ọ bụ bluuberi) mee ka akpụkpọ gị dị ọcha. Nke a bụ n'ihi ọnụnọ nke ihe akpọrọ arbutin, nke a na-akpọkwa hydroquinone-β-D-glucoside.
Arbutin na-enyere aka belata mmepụta nke melanin na ahụ. Ọ nwere abụọ isomers: α na β. Alpha isomer na-akwụsi ike karị ma dabara adaba maka ikpocha akpụkpọ anụ.
A na-ahụta ihe okike a dị ka nchekwa dị mma na ndị na-ewu ewu na-ewu ewu n'ọtụtụ ngwaahịa. Mgbe a ga-egbochi tyrosinase, ụdị dị ọcha kachasị dị irè.
Ọ bụghị ihe niile nwere okwu ahụ bụ “acid” bụ ihe na-emerụ ahụ. Ọtụtụ n'ime ihe ndị a bụ ihe okike ma baa uru. N’ihi ya atụla egwu.
Azelaic acid bụ ihe na-eme ọka bali na ọka ndị ọzọ, a na-ejikarị ya eme ihe banyere acne na rosacea. PH ya bụ otu ihe dị ka anụ ahụ, ya mere ọ dị mma.
Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala na nke a nwere ike inyere aka mee ka anụ ọcha dị ọcha. Nnyocha egosiwo na ọ bụ ụzọ dị irè isi na-emeso ụcha akpụkpọ ahụ. Ọ nwere ike inye aka igbochi mmepụta nke melanin.
Ngwurugwu a bụ tripeptide bụ ihe na-ewu ewu na-egbochi ịka nká nke na-echebe akpụkpọ ahụ site na mmebi oxidative. Akpụkpọ anụ bụ nanị otu n'ime ọtụtụ uru metụtara ya.
Glutathione nwekwara ikike iji gbochie mbibi anyanwụ. Itchacha akpụkpọ anụ na-ebelatakarị ike nchebe anyanwụ gị. Ma nke a mgwa ihe nwere mgbochi-oxidant Njirimara na ike-echebe gị site na UV ụzarị.
Otú ọ dị, ndị ọkachamara na-ekwu na molekul ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma mgbe a na-eji ya eme ihe n'ógbè ahụ. Otu ụzọ isi dozie nsogbu a bụ iji ya na ọgwụ ndị ọzọ (dịka vitamin C).
Dị ka anyị niile maara, ndị China na-eji ya maka ụdị akpụkpọ anụ dị iche iche. Nnyocha egosiwo na ihe ndị sitere na osisi licorice, karịsịa galapudine, nwere ikike ime ka anụ ahụ dịkwuo mma.
A kwenyere na ihe ndị a na-eme ka anụ ahụ na-enwu gbaa n'ụzọ dị iche iche. Mana ha na-arụ ọrụ site na igbochi ọrụ nke tyrosinase-ikekwe ihe ruru 50%.
Nnyocha e mere egosiwo na n'ihi na ọ nwere ike igbochi njikọ nke melanin, ọ nwere ike ịcha ọcha akpụkpọ. Ọ na-eme nke a site na igbochi ọrụ nke tyrosinase.
Crystal powder bụ ngwaahịa sitere na osikapa agbaze, nke dabara nke ọma maka anụ ahụ mebiri emebi. A na-enwetakarị ya mgbe a na-emepụta mmanya osikapa Japan. Ekwuru na ndị Japan ejirila ya ogologo oge na-agwọ ọrịa akpụkpọ.
I kwesiri iburu n'uche na odi iche na ulo oru di iche nke kojic acid dipalmitate nke ulo oru ndi ozo biri. Ọ bụ ezie na ihe ndị ọzọ nwekwara ike inye aka, ọ dịghị irè dị ka kojic acid.
Nke a bụ otu n'ime mkpụrụ abụọ alpha hydroxy acids (AHA) nke a mụkarịrị kachasị-nke ọzọ bụ lactic acid. N'ihi nha ha, akpọrọ ha nke ukwuu maka ikike ha nwere ịbanye n'ime akwa akpụkpọ ahụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ maara na glycolic acid bụ exfoliant. Ọ na - enyere aka ịkwalite ikike imegharị sel ma wepu mkpụrụ ndụ anụ ahụ na-adịghị mma ma ọ bụ nke nwụrụ anwụ. Ma nke a karịrị nke ahụ.
Site na ihe a, ị nwekwara ike ịnwe akpụkpọ anụ. Nnyocha egosiwo na ọ nwere ike inyere gị aka belata mmepụta nke melanin n'ime ahụ gị, si otú ahụ na-akwalite ụda akpụkpọ ahụ.
Ọ bụ ezie na ịcha ọcha ma ọ bụ ịcha ọcha nwere ike ịbụ isiokwu na-arụrịta ụka, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike imeli ya. Ndị nwere nsogbu akpụkpọ ahụ (dịka ntụ afọ, ntụpọ, ọchịchịrị na akara) agaghị atụ ụjọ site na akụkọ ọjọọ banyere nsogbu a.
Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ n'ozuzu anaghị anabata akpụkpọ ọcha n'ihi ohere nke mmeghachi omume na-adịghị mma. Nkọwa kachasị maka ụdị nsogbu a bụ na onye nrụpụta na-eji ihe ndị dị egwu, ikekwe nweta ego. Ka ndị ahịa na-amatakwu ihe, omume a na-emerụ ahụ na-agbanwe ugbu a.
Dịka ị pụrụ ịhụ n’elu, enwere nchekwa, ihe ndị sitere n’okike nke nwere ike ime ka ọdịdị gị na-enwu gbaa ma nwekwa ahụike. Kwesịrị naanị ịchọ ngwaahịa ndị a n'etiti ngwaahịa ịchọrọ ịzụrụ. Tupu ịzụrụ, biko mee nyocha na ihe ọ bụla ọzọ anyị na-akpọghị aha ebe a.
Kuki ndị dị mkpa dị ezigbo mkpa maka arụmọrụ nkịtị nke weebụsaịtị. Otu a nwere kuki naanị nke na-akwado ọrụ na atụmatụ nchekwa nke weebụsaịtị. Kuki ndị a anaghị echekwa ozi nkeonwe ọ bụla.
Ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere ihe ize ndụ, anụ na-acha ọcha ...
Nlele nke Boric Acid